Maalinta: Noofambar 17, 2017
Basaska CNG waxay ku yaalaan Duzce
Dawlada Hoose ee Düzce waxay sii wadaysaa inay basaska CNG ku darto diyaaradaheeda gaadiidka dadweynaha. 13 basas oo cusub oo leh gaaska dabiiciga ah (CNG) nidaamka shidaalka ee ay iibsatay Dowlada Hoose ee Düzce ayaa loogu adeegsan doonaa gadiidka rakaabka ee ka imaan doona Istanbul [More ...]
Akkaray Tram Line ayaa la gaari doonaa
2017 2.2 Km oo ka mid ah khadka tareenka Akçaray, kaas oo loogu deeqay muwaadiniinta bishii Agoosto Degmooyinka Magaalada Kocaeli. Xaraashka 2 ayaa la qaban doonaa Diseembar 7. Laga bilaabo laga bilaabo Isbitaalka Gobolka Seka illaa Waddada Xeebta [More ...]
Ra’isulwasaaraha Yildirim ayaa yimi shalay, warar si dhaw ula socda Ankara. Yıldırım wuxuu ku sugnaa xafladda furitaanka ee Keçiören. Qandaraaska tareenka dhulka hoostiisa ee AKM-Red, Waxaan ka hadleynaa mashruuc sanadle ah oo ah 16. Meelo cajiib ah oo cajiib ah meelo badan [More ...]
Raiisel wasaare Binali Yildirim, shalay 'Kecioren Ovacus Campus iyo gobolka 34 Training Facility Groundbreaking Ceremony ayaa ka soo qeybgalay. Xafladda, khadka metrooga ee isku xiraya Kereniören tareenka dhulka hoostiisa ee AKM ilaa Kızılay [More ...]
Republic of Turkey General Directorate of Maamulka Tareennada State KPSS 2017 / 2 80 samaynaya ka leexinayn ee Sarkaalka carbinta meelaynta dhexe. The Republic of Turkey waxa uu ku yaalaa inta u dhaxaysa hay'adaha ugu muhiimsan ee dalka gaadiidka iyo kortaan Maraykanka [More ...]
Wadada tareenka, oo loo qorsheeyay inay ka gudubto 3.Köprü, waxay dhex mari doontaa kaymaha, beeraha, daaqa iyo degsiimooyinka miyiga. Mashruuca Khilaafaadka 3. Qiimaynta Saamaynta Deegaanka ee 'Gebze-Sabiha Gökçen-YSS' [More ...]
Desi Green al Ground ee Gawaarida Nostalgic ee waddooyinka Istiklaal
Dabaq caag ah oo cagaaran ayaa la dhigay isgoysyada wadada 'Nostalgic Tram' oo ku taal wadada Istiklal. Sawirada ay qaadeen dadka jidadka soo qaaday ayaa sidoo kale saamiyo badan ka qaatay baraha bulshada. Qeybta Arimaha Istiklal ee Magaalada Istanbul ee Magaalada Istiklal Street [More ...]
Cinwaanka saxda ah ee baabuurka qaranka ee Konya
Ka dib soo-bandhigidii Kooxda Wadajirka ee Madaxweynaha ee dadweynaha ee soosaarka baabuurta qaranka, indhaha ayaa loo weeciyay halka laga dhisi doono baabuurka wadanku leeyahay. Hüseyin Çevik, Gudoomiyaha Gudiga Agaasimayaasha [More ...]
Kaamka-Tbilisi-Kars Tareenka Kariimadu ma soo jiidan kartaa dhamaanba Eurasia?
Wadada tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars waxay leedahay shaqada isku xirka dhamaan wadooyinka waaweyn ee birta ee Eurasia. Ku soo biiritaanka shabakadani waxay si buuxda u xaqiijineysaa danaha dhammaan waddamada dejiya siyaasadooda u gaarka ah mabaadi'da nabadda iyo horumarka. 30 wuxuu bilaabmayaa Oktoobar [More ...]
Dhalinyarada Yurub ee ugu da'da yar iyo Fudud ee Casriga ah ee IETT
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, 2 bilyan 140 milyan oo ah IETT'nin 2018 Sanadka Miisaaniyadda ayaa la oggolaaday. Arif, Maareeyaha Guud ee IETT, wuxuu cadeeyay in IETT ay leedahay basaska ugu da'da yar uguna casrisan qaarada Yurub. [More ...]
Mareegta Narlıdere ee loogu talagalay tirada shirkadaha si loo soo saaro 30'a
Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir, 7.2 kilomitir F.Altay-Narlıdere Metro Line oo loogu talagalay dhismaha qandaraaska 20 ee caalamiga ah bisha Diseembar. Shirkadaha waa-weyn ee waaxda dhismaha ayaa u tartami doona inay fuliyaan dhismaha mashruucan ballaaran. Ajaaniib badan ayaa ka mid ah [More ...]
Ma jiraan diiwaanada qarsoodiga ah ee 17.11.2017 ee nidaamkayaga.